Global Voices teny Malagasy » Raha Toa Ka Mametraka An’i Siria Ao Anatin’ny Lisitra Fotsy, Mbola Sakanan’ny Linkedin Hatrany Kosa Ireo Mampiasa Aterineto Any Sodana! · Global Voices teny Malagasy » Print
Raha Toa Ka Mametraka An'i Siria Ao Anatin'ny Lisitra Fotsy, Mbola Sakanan'ny Linkedin Hatrany Kosa Ireo Mampiasa Aterineto Any Sodana!
Voadika ny 17 Marsa 2019 15:05 GMT 1	 · Mpanoratra alNaser Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Sodàna, Syria, Mediam-bahoaka
Lahatsoratra iarahana mamoaka amin'ny ArabCrunch ity, izay nahazoana alalana:
Taorian'ny nanakanan ‘ny Linkedin, ilay tambajotra sosialin'ny fandraharahàna, ireo mpampiasa Aterineto tany Siria ary avy eo namela azy ireo indray  sady niala tsiny (toy ny notaterin'ny ArabCrunch.), voamarina fa mbola tsy afaka miditra amin'ny Linkedin ireo mpampiasa Aterineto any Sodàna (firenena Afrikana Arabo iray), izay nosakanan'ny Linkedin efa volana maro lasa izay.
Nilaza tamiko i Kay Luo LinkedIn, Tale zokiolona amin'ny Seraseran'Orinasa, fa ho voasakana foana ny ‘add-on’ Outlook-n'ny Linkedin.
”Raha ny mikasika ny fitrohana, isika (dia) mankato ny lalàna Amerikana, noho izany voasakana any Siria izy ity. Noho izany antony izany ihany, tsy afaka miditra amin'ny tranonkalanay i Sodàna.”
Nanoratra misimisy kokoa mikasika zavatra vitsivitsy izy tany anaty imailaka iray hafa ary nilaza tamiko fa tsy ho an'ny blaogy izany!
Azonao atao ny mahita fanampim-baovao bebe kokoa mikasika ny fampiharana ny sazy Amerikana .
Tsy matihanina amin'ny resaka lalàna aho, fa raha jerena ny lalàna, tsy misy na inona na inona milaza ny fanakanana ny fidirana amina tranonkala ao? Mbola azo idirana ao Sodàna foana ny sasany mpifaninana amin'ny Linkedin izay miorina any Etazonia, toy ny ecademy sy Plaxo ary ny ankamaoan'ireo tranonkala rehetra miorina any Etazonia, Noho izany, ny fanontaniana dia hoe nahoana no Linkedin irery ihany no manakana ny fidirana?
Nandefa imailaka tamin'i Lou ireto fanontaniana manaraka ireto aho:
Noho izany, ahoana no fomba nandraisanareo ny fanapahan-kevitra mikasika ny fanakanana ary iza tao amin'ny Linkedin no nanao izany ? Mpisolovavan'ny Linkedin ve no nilaza anareo izany? Sa fifandraisana nalefan”ny manampahefana tao amin'ny governemanta Amerikana ho an'ny Linkedin izany?
Mety afaka hanontany tena ny olona iray raha toa ny Linkedin ka manao fanambarana politika sy fanavakavahana ny vahoaka Sodaney (ny ankamaroany dia silamo mainty avokoa), satria namela an'i Siria fa tsy i Sodana?! Ndao hiandry izay ho lazain'ny Linkedin isika. Etsy andaniny, nifandray tamin'ireo mpisolovava vitsivitsy mipetraka any Etazonia aho mba hanazavana raha toa ka tafiditra iharan'ny famaizana ireo tranonkala sy fitrhana rindrambaiko ary hilazàko vaovao tsy ho ela ianareo.
Nilaza tamin'ny ArabCrunch i Ashraf Mansoor, tanora Mpandraharaha sady Mpamorona ny Twffaha tranonkala voalohany ho an'ny asa ho an'ny vehivavy any Afovoany Atsinanana : 
Mampivadi-po sy mandiso fanantenana no fahitako izany amin'ny maha-mpandraharaha ahy any Sodana, raha toa ka ireo orinasa ireo ihany no milaza fa mampihatra fenitra malalaka mba hahatonga ny Aterineto hisokatra kokoa, manakana firenena voafaritra manokana izy ireo, tena fihatsaram-belatsihy tanteraka. Dia inona koa avy eo? tsy ho afaka ny hanonta ireo pejy Wikipedia-nay izahay? Amin'ny vanim-potoana iantsoantsika olona maro isan-karazany hipetraka ary hanao resaka mitondra vokatra, tokony ho avelantsika ireny olona ireny hampiasa ireo fitaovana sy sehatra misy, toy ny olon-drehetra. Manahy aho fa hanaraka izany diany izany ireo orinasa hafa ary ho voahilika amin'ny Aterineto i Sodana sy ireo hafa.
Araka ny teniny, voasakana ary tsy afaka idirana any Sodana ireo tranonkala rehetra ampiantranoan'ny GoDaddy sy ireo vokatra rehetra azo trohana ao amin'ny Google (Gtalk, Google Gears ..etc).
Tao anatin'ny antso nataony tamiko, nandroso hevitra ho ahy izy hanoratra lahatsoratra vahiny ho an'ny Blaogin'ny Linkedin, kanefa heveriko fa mety hanova ny fisainany izy ireo, satria tena mampahafantatra be azy ity mihitsy aho 😛
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/17/133407/
 Lahatsoratra : http://arabcrunch.com/2009/04/while-white-listing-syria-linkedin-keeps-sudan-blocked.html
 namela azy ireo indray: http://arabcrunch.com/2009/04/breaking-linkedin-bows-restores-service-to-syrian-users-says-a-human-error.html
 Kay Luo : http://twitter.com/kluo
 sazy Amerikana: http://www.ethanzuckerman.com/blog/2009/04/20/linkedin-briefly-blocks-syria-more-confusion-over-tradecommerce-regulations/